मन्त्रिपरिषद् विस्तार: ओली-देउवाबीच सवालजवाफ - BBC News नेपाली
मन्त्रिपरिषद् विस्तार: ओली-देउवाबीच सवालजवाफ
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयलाई लिएर संसदको अन्तिम बैठकमा शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच सवाल जवाफ भएको छ।
ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिले साथ दिएको भन्दै उनीहरुको प्रशंसा गरे।
ओलीले भीमकाय आकारको मन्त्रिमण्डलको खाँचोमा प्रश्न उठाउँदा देउवाले त्यो आफ्नो अधिकार भएको भन्दै बचाउ गरे।
सरकार विस्तारपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोग र कानूनी परामर्श समेत गरेकी थिइन्।
पहिले नै ५६ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्‌मा शुक्रवार राप्रपाका ८ जना थपेर ६४ सदस्य पुर्याएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला उक्त विषयले संसदको बिदाइ बैठकमा समेत प्रवेश पायो।
आफ्नो दलले सरकारमा रहेर निर्वाचन गर्न सघाउने वचन दिंदा दिंदै पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरेर आफ्नो अविश्वास गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दु:ख व्यक्त गरे लगतै बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने प्रधानमन्त्रीलाई व्यङग्य गर्दै गरे।
उनले भने, "निर्वाचन नै गराउनका लागि अहिले काम नै नभएका विनाविभागीय मन्त्री किन चाहियो कुस्ती खेल्न त हैन होला?"
निर्वाचन नै गराउनका लागि अहिले काम नै नभएका विनाविभागीय मन्त्री किन चाहियो कुस्ती खेल्न त हैन होला?
प्रमुख दलको सभापति र प्रधानमन्त्रीका हैसियतले ओली पछि आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारको बचाउ गरे।
उनले भने, "यो संविधानमा अहिले लागि मन्त्रिपरिषद्को संख्या तोकिएको छैन। संक्रमणकाल पछिका लागि मात्रै संख्या तोकिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रधामन्त्री प्रयोग गर्न नपाउने यो संख्या घट्न पनि सक्छ, केही दिनमै थाहा पाउनुहोला नि!"
आफ्नो मन्तव्यका क्रममा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयप्रतिको आफ्नो विरोध र आचारसंहिता उल्लंघन भएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई समेत गराएको बताए।
सरकार विस्तारले निर्वाचन आचारसंहिता र कानूनको उल्लंघन गरिएको भन्दै उनले आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न प्रधामन्त्रीलाई आग्रह समेत गरे।
उनले भने, "केही कुरा चिप्लिए गएको हुन सक्छ तपाईंबाट पनि। आठ जनाको नाम चिप्लिएर गएको छ त्यसलाई फिर्ता लिनुहोस। यो असंवैधानिक छ, गलत छ।"
निर्वाचन आयोगका प्रमुखले नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले निर्वाचनमा कुनै असर पर्दैन भनी सक्नुभयो। राष्ट्रपति जति उचाले पनि उचालिनु भएन, संवैधानिक राष्ट्रपति बनेर बस्नुभयो।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले आचारसंहिता उल्लंघा नगरिएको र कानूनको समेत पालना गरिएको जिकिर गर्दै जवाफ दिए।
उनले भने ,"निर्वाचन आयोगका प्रमुखले नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले निर्वाचनमा कुनै असर पर्दैन भनी सक्नुभयो। राष्ट्रपति जति उचाले पनि उचालिनु भएन, संवैधानिक राष्ट्रपति बनेर बस्नुभयो।"
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार थप मन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन्।
आयोगले यसअघिको विस्तार सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर आयोगको परामर्श लगत्तै राष्ट्रपतिले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउने निर्णयमा पुगेकी हुन्।